Mutungamiri wesangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruwa, re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, vakamiswa pamberi pedare redzimhosva neChina asi nyaya yavo haina kunzwikwa mudare iri.
VaMasaraure vanoti vakaudzwa kuti vadzoke zvakare kudare redzimhosva musi wa 11 Kubvumbi sezvo mapurisa asati awana humbowo hwakakwana pamhosva yavanonzi vakapara.
VaMasaraure vaudza Studio7 kuti hurumende dzisina hutongi hwejekerere ndidzo dzinotanga dzasunga munhu dzozotsvaka humbowo mushure.
VaMasaraure ndeumwe wevanhu vane chitsama vakasungwa muna Ndira vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera kuratidzira kwemazuva matatu kwakanga kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU.
Vamwe vakasungwa vanosanganisira Pastor Evan Mawarire, mumiriri weMbizo muparamende, VaSettlement Chikwinya, munyori mukuru weZCTU, VaJaphet Moyo, mutungamiri weZCTU, VaPeter Mutasa pamwe nemumiriri weHarare West muparamende, Muzvare Joana Mamombe nevamwe.
VaMasaraure vanoti gweta ravo, VaKudzai Kadzere, vachaudza dare redzimhosva rirase nyaya yavari kupomerwa kana hurumende ikatadza kusvitsa humbowo hwakati tsvikiti mudare pavachamira pamberi pedare mwedzi unouya.